ओलिभ पत्ता निकाल्ने अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शन - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
जैतुन पात निकाल्ने एक शक्तिशाली आहार पूरक र चिकित्सीय हो किनकि यसमा कडा एन्टीआक्सीडन्टहरू हुन्छन् जस्तै पोलिफेनोल ओलिउरोपेइन, हाइड्रोक्साइट्रोसोल र भर्बास्कोसिड। अल्ट्रासोनिक निकासी जैविक पात्राबाट बालीएक्टिभ यौगिकहरू जस्ता पोलिफेनल्स, फ्लाभोनहरू र टेरपेनोइड्सलाई छुट्ट्याउन एक्लोस गर्न अति कुशल टेकनीक हो।
जैतुन पत्ता निकाल्ने
जैतुन (ओलिया यूरोपिया) पातहरू, कृषि फोहोर वा उप-उत्पाद, एक उत्तम स्रोत ओएस प्राकृतिक एन्टिआक्सिडन्टहरू हुन्। जैतुन पातमा बिभिन्न पोलीफेनोलहरू हुन्छन् (जसलाई बायोफेनोल पनि भनिन्छ), जस्तै ओलिरोपेइन र ओलिसेन। पोलीफेनल्सहरू प्राकृतिक रूपमा बोटबिरुवाहरूमा पाइन्छन् र जैतुन पात निकाल्ने स्वास्थ्य लाभहरूमा योगदान गर्दछ। पोलीफेनोल बाहेक, जैतुनको रूखका पातहरू एन्टिऑक्सिडन्टहरू समृद्ध हुन्छन्, जस्तै लिगस्ट्रोसाइड आइसोमर्स, हाइड्रोक्साइट्रोसोल, टायरसोल र क्याफिक एसिड।
जैतुन पात निकासी जैतुन पातमा फाइटोकेमिकलको केन्द्रित हुन्छ र यसैले शक्तिशाली एन्टिआक्सिडन्टहरूको उच्च मात्रा हुन्छ। जैतुनको पात निकाल्न परम्परागत रूपमा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रबल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। उदाहरण को लागी, यो सामान्य चिसो, खोकी, र घाँटी दुखाइ को लक्षणहरु को उपचार को लागी चलाइन्छ।
यसबाहेक, अनुसन्धानले देखाए कि जैतुन पात निकाल्ने पोलीफेनोलहरूले हृदय रोगहरू, कम कोलेस्ट्रॉलको स्तर कम गर्न, वजन घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, एन्टिमाइक्रोबियल प्रभाव देखाउन सक्छ र क्यान्सर विरोधी एजेन्टको रूपमा कार्य गर्न सक्छ।
यस कारणका लागि, जैतुनका पातहरू (Olea europaea L. folium) बाट निकाल्नेहरू फार्मास्यूटिकल्स र आहार पूरकहरूको उत्पादन सूत्रहरूमा सक्रिय घटकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसबाहेक, जैतून पातका अर्कहरू पौष्टिक पूरक, चिकित्सीय सामग्री, सौन्दर्य प्रसाधन, साथै खाद्य र पेय पदार्थहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
संचार जैतुन तेल: जैतुनको पात निकाल्न जैतुनको तेललाई समृद्ध गर्न प्रयोग गरिन्छ जस्तै अतिरिक्त कुमारी अलिभ तेल। जैतुन पात निकासीको साथ सुदृढ गरिएको, जैतुनको तेलको स्वाद प्रोफाइल बढी छ र ओलिभ तेलको ओआरएसी मान बढाइयो। जैतुनको पातले पिसेको जैतुन तेलको प्रदर्शनले उन्नत शेल्फ लाइफ र उच्च ताप स्थिरता देखाउँदछ किनकि एन्टिऑक्सिडन्टहरू फ्रि रेडिकलहरू मार्छन र द्वेषलाई रोक्छ।
UIP4000hdT, बोटानिकल एक्स्ट्र्यासनको लागि kkW शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर
जैतुन पत्ता यौगिकहरू
जैतुन पातमा फेनोलिक यौगिकहरूको संरचनामा ओलिउरोसाइड्स (ओलेयुरोपिन, भेरबास्कोसाइड), फ्लाभन्स (ल्युटोलिन, डायओस्मेटिन, एपगेजिन---ग्लूकोज, ल्युटोलिन 7-ग्लूकोज, डायओस्मेटीन 7-ग्लूकोज), फ्लाभोनोल (रुटिन), फ्लाभन-- आईएलएस (क्याटेचिन) र फिनोलसिक डेरिभेटिभ्स (टायरसोल, हाइड्रोक्साइट्रोसोल, भनिलिन, भानिलिक एसिड, क्याफिक एसिड)। ओलिउरोपेन र हाइड्रोक्साइटिरसोल जैतुन पातमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिनोलिक यौगिकहरू हुन्।
ओलेउरोपेन, एक गैर-विषाक्त जैतुन आइरिडोइड (मोनोटेर्पेनोइडको एक प्रकार), फिनोलिक कटु यौगिकको एक प्रकार हो। हरियो जैतुन छाला, मासु, बीउ, र पातमा अवस्थित हुँदा ओलिउरोपिन सबैभन्दा परिपक्व जैतुनका पातहरूमा पाइन्छ। –-१–% सुख्खा तौलको सामग्रीको साथ यो जैतुन ल्याभमा सबैभन्दा प्रख्यात बायोएक्टिव अणु हो। जैतुन खेतीपाती, माटो र फसलको समयमा निर्भर गर्दै, ओल्युरोपेन सामग्री १–-२%% सुख्खा तौलसम्म पुग्न सक्छ।
हाइड्रोक्सीटेरोसोल ओलेरोपेइनको मेटाबोलिट हो। दुबै अणुहरू उनीहरूको शक्तिशाली एन्टीआक्सीडन्ट गतिविधिका लागि परिचित छन्, जुन जैतुन तेलको केही एन्टिक्सिडन्ट, विरोधी भड़काउने, र रोग-लड्ने गतिविधिहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ। हाइड्रोक्साइरोसोलको एक उच्च ज्ञात ओआरएसी (अक्सिजन रेडिकल शोषक क्षमता) मानहरू हुन्छन् जुन प्राकृतिक एन्टिऑक्सिडन्टहरूमा देखीन्छ।
एक पूर्ण स्पेक्ट्रम जैतून पात निकासीमा असंख्य पॉलीफेनल्स, एन्टिऑक्सिडन्टहरू र अन्य फाइटोकेमिकल हुन्छन्, जसमा synergistic प्रभावहरू छन्। अल्ट्रासोनिक निकासी एक भरपर्दो निकासी प्रविधि हो, जसले जैतूनका पातहरूबाट सबै फाइटोकेमिकलहरू निकाल्छ र यसैले अत्यधिक शक्तिशाली ब्रॉडब्यान्ड एक्स्ट्र्याक्ट उत्पादन गर्दछ।
UP100H एमएस १ son सोनोट्रोडको साथ बोटानिकलहरू, जस्तै जैतुनको पातहरूको लागि
अल्ट्रासाउन्ड र अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्शन के हो?
अल्ट्रासाउन्ड २०kHz भन्दा बढीको साथ ध्वनि कम्पनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, अर्थात् प्रति सेकेन्ड २०,००० भन्दा बढी दोहोरो। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जुन मानव श्रवण स्पेक्ट्रमको माथि छ। अल्ट्रासाउन्डले यस प्रकारले ध्वनिक कम्पनहरूको एक धेरै ठूलो दायरा कभर गर्दछ, जसको मतलब असंख्य भिन्न अनुप्रयोगहरू अल्ट्रासाउन्डको क्षेत्रमा खस्छन्। प्रयोगको सबैभन्दा प्रख्यात उदाहरणहरूमा डाक्टरको इमेजिंग प्रक्रियाहरू, कारहरूमा पार्कि assistance सहयोग र सामग्रीहरूको गैर-विध्वंसक परीक्षण समावेश छ। उच्च आवृत्ति उल्लेख गरिएको उदाहरणका लागि, गैर-विनाशकारी अल्ट्रासाउन्ड प्रयोग गरिएको छ।
उच्च-शक्ति अल्ट्रासाउन्ड उच्च-तीव्रता, कम आवृत्तिको लगभग आवृत्तिको साथ ध्वनि तरंगहरूको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। 20-60kHz यी उर्जा-घन ध्वनी तरंगहरूले तरल पदार्थमा वैकल्पिक उच्च दबाव चक्र (सression्कुचन) र कम दबाव चक्र (दुर्लभता) उत्पन्न गर्दछ। कम दबाव चक्रको बखत, उच्च उर्जा अल्ट्रासोनिक छालहरूले तरलमा साना खाली भ्वाँसी बुलबुले वा voids सिर्जना गर्दछ। जब यी बुलबुले एक भोल्युममा पुग्छन् जहाँ उनीहरू थप ऊर्जा लिन सक्दैनन्, तिनीहरू एक उच्च दबाव चक्रको बखत फुट्छन्। यो बुलबुला प्रकोप घटना cavitation रूपमा चिनिन्छ।
काभेटेशनले तरल वा घोलमा स्थानीय तातो ठाउँहरू सिर्जना गर्दछ, जुन K००० सम्मको तापमान र २००० एटीएमसम्मको दबावमा पुग्न सक्छ। थप रूपमा, cavitation बुलबुले को फ्लो २ 28० मिटर / सेकेन्डको वेगमा तरलको जेटहरू सिर्जना गर्दछ। यी स्थानीय रूपमा देखा पर्ने चरम अवस्थाले बिरूवा कोषहरू फोर्नका लागि बनाउँदछ, जसले गर्दा प्लान्ट सेलको भित्री भागमा जम्मा हुने बायोएक्टिव पदार्थहरू मुक्त हुन्छन्। यसको अर्थ, ध्वनिक काभेटेशनले बिरूवा कोषहरूलाई अवरोध पुर्‍याउँछ र इंट्रासेल्युलर अणुहरूको उच्च प्रसार को निकासी समाधान (घोलक) मा लैजान्छ, जसले गर्दा यसले ठूलो ट्रान्सफर बढाउँदछ। उच्च मास ट्रान्सफरको अर्थ उच्च निकासी दर हो। तसर्थ, जडिबुटी, पात, फलफूल र अन्य बोटबिरुवा सामग्री जस्ता वनस्पति विज्ञानबाट उच्च-गुणस्तर निकासी उत्पादन गर्न अल्ट्रासोनिक प्रोबहरू सबै भन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने उपकरणहरू मध्ये एक हो।
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शनले विभिन्न फाइदाहरू प्रदान गर्दछ जस्तै पूर्ण निकासी / धेरै उच्च उत्पादन, घटाउने समय, सुधार क्षमता, कुनै पनि विलायकसँग अनुकूलता, र एक गैर-थर्मल निकासी विधि भएको।
फिगरले अल्ट्रा-हाई-प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफीलाई डायोड-एरे डिटेक्टर (UHPLC-DAD) का साथ क्रोमेटोग्राम अल्ट्रासोनिक रूपमा निकालेको जैतून-पात फेनोलिक्स देखाउँदछ। शिखर १ र २ 5२5 एनएम (रातो रेखा) मा पत्ता लाग्यो, जबकि चोटी ((निलो रेखा) २ 28० एनएममा पत्ता लाग्यो।
चित्र र अध्ययन: जियोकोमेटि, जे। एट अल। (२०१ 2018)
अल्ट्रासोनिक अर्कर UIP2000hdT (2kW) ब्याच रिएक्टरको साथ
जैतुनको पात निकाल्ने ओलिरोपेइन, क्याफिक एसिड, हाइड्रोक्साइरोसोल, भेरबास्कोसाइड, रुटिन, क्वेरसिटीन आदि जस्ता पोलिफेनोलहरू समृद्ध छन्।
स्रोत: उमर एट अल। २०१
Sonication द्वारा निर्मित जैतून पात निकासी
अल्ट्रासोनिक काभेटेशनको "हट स्पट" जोनको चरम वातावरणीय अवस्थाले बोट सामग्री र यसको एक्स्ट्र्यासिबिलिटीमा बिभिन्न प्रभाव पार्दछ। यसमा सेल झिल्ली को छनौट पारगम्यता कोशिंग, कोष भित्री र विलायक बीच पदार्थको बढेको आदानप्रदान, मेकानिकल सेल अवरोध र intracellular पदार्थहरु को रिहाई समावेश छ (जस्तै फाइटो-रसायन जस्तै oleuropwin, hydroxytyrosol, गैलिक एसिड आदि)। । यी प्रभावहरूले एक धेरै छोटो Sonication समय भित्र उच्च गुणवत्ता निकाल्ने उच्च उत्पादनको परिणाम दिन्छ। 400०० वाट अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर जस्तै
हिल्सचरको UP400St ले १० लिटर ब्याचको बोटानिकल स्लरी 5--8 मिनेट भित्रमा प्रक्रिया गर्न सक्छ। औद्योगिक अल्ट्रासोनिकेटरहरूले बोटबिरुवा सामग्री र निरन्तर प्रवाहमा विलायक भएको स्लरी प्रक्रिया गर्छन्। मध्यम एक अल्ट्रासोनिक रिएक्टर मार्फत पम्प गरिएको छ र त्यहाँ सोनिकेटेड छ। औद्योगिक मापन मा, एक UIP4000hdT (4kW) लगभग प्राप्त गर्न सक्दछ। 3L / मिनेट
उच्च निकासी उत्पादन र प्रक्रियाको गतिको कारण, अल्ट्रासोनिक निकासी विशेष रूपमा कुशल छ। तसर्थ, Sonication द्रुत रूपले बहु निकासी निर्माताहरू द्वारा अनुकूलित गरिएको छ जसले उच्च गुणस्तरको अर्कर्टहरू उत्पादन गर्दछ, जस्तै CBD, क्यानाबिनोइड्स, भेनिला, शैवाल, अदुवा, र अन्य थुप्रै बोटानिकल अर्कहरू। अल्ट्रासोनिक काभेटेशनले बोटानिकलहरूमा निहित सक्रिय कम्पाउन्डको---9999% को एक अर्क उपज प्राप्त गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, अनुसन्धानले जैतुन पातहरु बाट कुल फेनोलिक्स को जारी को लागी एक 99,27% निकासी दक्षता देखायो। (Luo, २०११) अल्ट्रासाउन्ड प्रक्रिया कच्चा माल र चाहिएको निकासी क्वालिटी प्रक्रिया प्यारामिटरहरू समायोजन गरेर अनुकूलन गर्न सकिन्छ (अल्ट्रासोनिक आयाम, तापमान, दबाव, चिपचिपापन)।
अल्ट्रासोनिक निकासी लगभग कुनै पनि प्रकारका विलायकसँग उपयुक्त छ। अल्ट्रासोनिक सहायताले जैतुन पात निकासका लागि 80०% जलीय इथेनॉल सबैभन्दा प्रभावकारी फेला परेको छ। तर विशिष्ट फाइटोकेमिकल यौगिकहरूको लागि निकासी उपज भिन्न ध्रुवीयता (जस्तै मेथेनोल) को साथ अर्को घोलक रोजेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
तपाईको अतिरिक्त कुंवारी जैतुनको तेल उत्पादन बढाउनमा रुचि छ? त्यसो भए ईवीओ को अल्ट्रासोनिक malaxation को बारे मा अधिक जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासन सिस्टमका फाइदाहरू
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शनका फाइदा भनेको उच्च निकासी उत्पादन, विलायकको स्वतन्त्र रोजाइ (जस्तै पानी, इथेनॉल, पानी-इथेनॉल मिश्रण, जैतुनको तेल, आदि), साथै सरल र सुरक्षित अपरेशन हो। Sonication को गहन यांत्रिक शक्ति को कारण, पारिस्थितिक र हल्का घोलकहरु जस्तै पानी, इथेनॉल आदि एक असाधारण निकासी दर र उत्पादन प्राप्त गर्न को लागी पर्याप्त हुन्छ। नतिजाको रूपमा, अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासनले खाली गर्ने समय छोटो बनाउँदछ र घोलकको कम प्रयोग वा हल्का, हल्लावर्टर घोलकको उपयोग सक्षम गर्दछ। यसको मतलब अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्सनले दुबैलाई अनुमति दिन्छ, उच्च निष्कर्षण दरहरू र स्वस्थ अर्कहरू (जस्तै चिसो पानी अर्क)। प्रक्रिया तापक्रम Sonication समयमा ठीक नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अत्यधिक उच्च तापमान र पदार्थहरु को वाष्पीकरण को कारण अर्क को तापीय अपघटन को जोगिदैन।
एक सुपरक्रिटिकल सीओको तुलनामा2 एक्स्ट्रक्टर, एक अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरको अधिग्रहण लागत कम छ। अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरले अपरेटिंग लागत, सरल, प्रयोगकर्ता मैत्री अपरेसन र व्यावसायिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि अंक स्कोर गर्न सक्दछ।
अल्ट्रासोनिक्स – औद्योगिक उत्पादन सम्म सानो मात्राको लागि
अल्ट्रासोनिक प्रशोधनको एक विशेष सुविधा निकाल्ने प्रक्रियाको रैखिक स्केलेबिलिटी हो। सम्भाव्यता अध्ययन र साना ब्याचेसको उत्पादन सजिलैसँग खुला बर्तनमा सुलभ अल्ट्रासोनिक उपकरणसँगै गर्न सकिन्छ। यसले अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण प्रक्रियाको दक्षता र गुणवत्ता परीक्षण गर्न सजिलो बनाउँदछ। सानो नतीजामा प्राप्त कुनै पनि परिणामहरू पूर्ण रूपमा पुन: उत्पादन गर्न सकिन्छ र अप-स्केल्ड गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टरको डिजिटल नियन्त्रण र एक आन्तरिक एसडी कार्डमा अल्ट्रासोनिक प्यारामिटरहरूको स्वचालित डाटा लगि प्रक्रियाको सटीक अनुगमन र स्थिर गुणस्तरको प्रजनन क्षमतालाई अनुमति दिन्छ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सको उत्पाद पोर्टफोलियोले प्रत्येक स्केलको लागि अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्रक्टर प्रदान गर्दछ – line० वाट ह्यान्डहेल्ड उपकरणहरूबाट १,000,००० वाट औद्योगिक इन्टरनेट उत्पादनको लागि अल्ट्रासाउन्ड। हिलस्चर अल्ट्रासोनिकले दशकौंको अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शनको अनुभव र विश्वव्यापी, सयौं र विस्तृत सल्लाहहरूको ग्यारेन्टी प्रदान गरेकोमा सयौं अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासन सिस्टमको स्थापनाको लागि धन्यवाद।
जैतुन पत्ता निकाल्ने को स्वास्थ्य लाभ
जैतुन पातमा प्रमुख घटकहरू सेकोइरोइडोइड्स (मोनोटेर्पेनोइड्सको एक प्रकार) हुन्छन् जस्तै ओलिरोपेइन, लिगस्ट्रोसाइड, मेथिलोलेरोपेइन, र ओलियोसाइड; फ्याभानोइडहरू जस्तै एपीजेनिन, केम्फेरोल, ल्युटोलिन, र क्रिसोराइओल; र फेनोलिक यौगिकहरू जस्तै क्याफिक एसिड, टायरोसोल, र हाइड्रोक्साइट्रोसोल। जैतुन पातका अर्कहरूले एन्टी-इन्फ्लेमेटरी प्रभावहरू पाउँदछन् र पुरानो रोगहरू (जस्तै मधुमेह, गठिया), हृदय रोग, न्यूरोडोजेरेटिभ रोग, र क्यान्सरको बिरूद्ध कार्य गर्ने संयन्त्रहरू सक्रिय पार्नका लागि पत्ता लगाइएको छ। उदाहरणका लागि, मधुमेह बिरामीहरूमा ओल्युरोपिनको फाइदाजनक असरहरू ऑक्सीडेटिव तनाव घटाउने, रक्तचाप घटाउने, उन्नत ग्लाइकेसन इन्ड प्रोडक्ट्स (एजीई) गठन, रक्त ग्लूकोजको स्तरमा कमी, ग्लूकोज-प्रेरित वृद्धिमा जोडिएको छ इन्सुलिन र GLP-1 रिलीज, अन्य सेलुलर र मेटाबोलिक प्रभावहरू बीच ग्लूकोजको परिधीय uptake मा वृद्धि।